यी हुन् कहिलै प्रेममा धोका नदिने ५ राशि भएका युवतीहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन् कहिलै प्रेममा धोका नदिने ५ राशि भएका युवतीहरु !!
जुन युवतीको राशि वृष हुन्छ उनी प्रेमको सम्बन्धमा कहिले पनि धोका नदिने खालकी हुन्छिन् भन्ने मान्यता छ । यस राशिकी युवतीले आफ्नो पार्टनरलाई धेरै नै माया गर्छिन् । कन्या राशि कन्या राशि भएकाहरुलाई धेरै नै समझदार मानिन्छ ।
कन्या राशि भएकी युवतीले पनि प्रेममा कहिले पनि धोका दिँदैनन् । वृश्चिक राशि यस राशिका मानिसहरु धेरै नै भावुक मानिन्छन् । यस राशिकी युवतीहरुले आफ्नो पार्टनरलाई साँचो माया गर्ने खालका मानिन्छन् र यिनीहरुले सम्बन्धको महत्वसमेत राम्ररी बुझेका हुन्छन् ।
मकर राशि मकर राशिका युवतीहरु पनि धेरै नै भावुक खालका हुन्छन् । यिनीहरु जब कुनै केटासँग प्रेम गर्छन् तब पूरा सच्चाइका साथ गर्छन् र कहिले पनि अलग हुन चाहँदैनन् । (gnewsnepal बाट सभार)